८५ वर्षको इतिहास बोकेको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय खारेज « Pahilo News
८५ वर्षको इतिहास बोकेको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय खारेज
प्रकाशित मिति : 17 September, 2018 11:05 am
काठमाडौ, १ असोज । शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय पनिका खारेज भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार वि. सं. १९९० देखि विद्यालय तहको अन्तिम परीक्षा एसएलसी सञ्चालन गर्दै आएको पनिका खारेज भएको हो । ८५ वर्षको इतिहास बोकेको पनिका खारेज भएपछि अब त्यसले गर्दै आएका काम कारबाही राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डबाट हुनेछन् ।
शिक्षा ऐनको नवौँ संशोधनले कक्षा १२ सम्मलाई विद्यालय तह बनाएको छ । कक्षा ८ सम्म आधारभूत र कक्षा ९–१२ सम्मलाई माध्यमिक तहमा विभाजन गरेको छ । विद्यालय तहको अन्तिम परीक्षा कक्षा १२ मा हुने र त्यसका लागि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड गठन भई सञ्चालनमा आइसकेको छ । बोर्डले दिएको अख्तियारीअनुसार माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसइई, कक्षा १० को परीक्षा लिएको थियो । बोर्डका अध्यक्ष प्राडा चन्द्रमणि पौडेलले पनिका खारेज भएको पत्र आएको र उसले गरेका काम गर्न बोर्ड तयार रहेको बताए ।
शिक्षा मन्त्रालयले साबिकको पनिकामा कार्यरत कर्मचारीलाई अर्को निर्णय नहुँदासम्म बोर्डमै हाजिरी गराई काममा लगाउने व्यवस्था मिलाउने शिक्षा मन्त्रालयले निर्णय गरेको छ । कार्यालय खारेजी र त्यहाँका कर्मचारीलाई बोर्ड हाजिरी गराउन शिक्षा मन्त्रालयले पत्राचार गरिसकेको छ । नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।